Mee Ka Trusttụkwasị Obi Obi Gị Saysị Mba! | Martech Zone
Kedu oge ikpeazụ ị nọdụrụ n'akụkụ onye na-ere ahịa wee sị, “Ndo, ikekwe anyị agaghị enwe ike ị nweta ọnụahịa ahụ ma ọ bụ / ma ọ bụ atụmanya ndị ahụ“. Enweghị m, ma.
N'abalị a ka m si na nkwekọrịta m gaara eme wee mechie anya m. Agbanyeghị, amaara m na ịdị mfe nke nkwekọrịta ahụ ga-agbanwe wee mepee ikpuru nke ikpuru. M ga-edozi ma wụnye blog maka mmadụ wee, na ndabara, m ga-abụ nkwado blog ha, nkwado IT ha na nkwado ha. Anaghị m eche - ana m ekwu site na ahụmịhe. Ọ bụ ya mere m ga - eji tụlee atụmanya dị ka sọftụwia dịka onye na - ere ọrụ Ngwakọta. (Nkwupụta: Abụ m onye na-eketa oke)
Ndị ahịa m na-enyere aka na ịde blọgụ abụghị nkwekọrịta otu oge, anyị nwere mmekọrịta na-aga n'ihu iji kpuchie nsogbu ndị a. Obi dị m ụtọ na-enyere ha aka ọ bụla nke ha mkpa ebe ọ bụ na ndị na-atụ anya ego ndị ahụ. Nke ahụ abụghị ikpe n'abalị a… M jere ije site na arịrịọ a ebe ọ bụ na ọ bụ naanị oru ngo see okwu. E nweghị ndị dị ka ihe dị ka a web oru ngo na-agwụ… ma ụlọ ọrụ na-aga n'okpuru. Site na ọdịnaya, iji chepụta, na ikpo okwu, na mwekota project ọ bụla web oru ngo evolves dị ka achọ mgbanwe karịrị oge. Gingde blọgụ na-emekwa. Ezubere ngwanrọ dị ka ọrụ (SaaS) iji dozie nsogbu na nkwado na-aga n'ihu. Adịghị m.
Back to my point… eleghị anya ma ọ bụrụ na ndị ọzọ ụlọ ọrụ tụgharịa enweghị ezi uche Amawaputala, crazy timelines, na mkpari atụmanya ndị ọzọ nke na-eme ihe n'eziokwu ulo oru nwere ike n'ezie iru ntụkwasị obi na anyị atụmanya. Nsogbu a bụ ọtụtụ ndị na-anọghị ebe ahụ, ọkachasị n'ịzụ ahịa n'ịntanetị na ngalaba mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, na-atụ ụjọ ịhapụ obere ego.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-ahọrọ ịkwụ ụgwọ ha site n'aka ndị ahịa karịa ịnata ego zuru oke iji mezuo nkwa ha. Ọ bụ ihe nwute n'ihi na ndị ọzọ ogbenye sap na-eje ije n'ọnụ ụzọ na-ozugbo wakporo t ka ha na-a 2-bit ohi n'ebe idina n'ike, ịkwakọrọ na efu akpa ego.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmechaa ọrụ na oge, nyefee nkwa gị ma ọ bụ nweta obere ego na-arụ ọrụ ahụ, gịnị kpatara ị ga-eji were ire ya? Ọnwa ole na ole gara aga, m ga-ekewa ụzọ na ezigbo enyi na ụlọ ọrụ ha n'ihi na ọrụ anyị anaghị arụ ọrụ. Anaghị m atụ anya atụmanya ha… ọ ga-akara m mma ka ọbụbụenyi wee funahụ ego karịa ịda mba. Anyị gaara eme nke ọma na ọrụ m siri n'ebe a pụọ… Amaara m ya.
Enwere m ike iji ego ahụ? N'ezie! Obere oru di ka nke a bu nnukwu ego na-adighi ahia ma nwekwaa ike iburu anyi site na nnukwu nkwekọrịta ha na abia. Enweghị m ike ime ya. N’icheghachi azụ, ọ ga-adị m mma ma a sị na m gapụrụ n’ọbụ obere nkwekọrịta site na mgbe m bidoro azụmahịa m.
Ihe na-eju anya bụ na ndị a bụ otu ndị ahịa ahụ na-abịakwute m n'okporo ụzọ na nnukwu ọrụ ndị nwere nnukwu ihe nnweta, ụgwọ dị mma na usoro iheomume na-agbanwe agbanwe. Oge ọ bụla m kwuru “Mba” ugbu a, amaara m na m na-ewulite ntụkwasị obi na ohere iji nweta ohere ka mma n'okporo ụzọ. Ikwesiri, kwa.
Old Spice na-akpali: Mgbe inwere Obi Abụọ, Gaa Ogbi
Jul 16, 2010 na 3:56 PM
Anyị n'ezie na-agba ọsọ dum ngosi gburugburu "Ike nke Nke." Gụkwuo banyere mkpa ịjụ ịrụ ọrụ n'otu edemede site n'aka nke anyị Ashley Lee, Nke ahụ abụghị ọrụ m!